HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 27-DEC-2020
Sunday December 27, 2020 - 10:09:15 in Wararka by Mogadishu Times
Xog: Farmaajo oo go’aan ka gaaray qabashada doorashada
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu amray in la qabto doorashada dalka, ayada oo lagu bil laabyo xildhibaanada Aqalka Sare, xilli aan weli xal laga gaarin tabashooyinka ay qabaan maamullada qaar iyo mucaaradka.
Doorashada Aqalka Sare ayaa la sheegay inay ka billaaban doon to M/Baydhaba, kadibna lagu cada adin doona madaxda Galmudug iyo HirShabelle inay ku xejiyaan Dhuusamareeb iyo Jowhar, waxaana magaalooyinkaas qaarkood la geyn doonaa ciidan kale oo dheeraad ah.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in go’aanka ay la ba maalmood ka hor qaateen Guddiga doorashada heer federal ee lagu muransan yahay ee ay kusoo saa reen jadwal doorasho uu salka ku hayo amarka madax weynaha, oo inta badan xubnaha guddigan ay yihiin taageerayaashiisa.
Jadwalka doorasho ayaa dhigaya in xildhibaanada Aqalka Sare la doorto 30-ka bishan illaa 6-da Janaayo, waxaana xog ay heshay Caasimada Online ay sheege ysaa in maamulka K/Galbeed uu billaabi doono.
Sidoo kale, waxa uu jadwalka dhigayaa in doorasha da xildhibaanada Aqalka Hoose lagu soo geba-gebe eyo 9-ka illaa 28-ka Febraayo. Jadwalka kuma qorna xilliga ay dhaceyso doorashada madaxweynaha.
Madaxweynaha K/Galbeed Cabdicasiis Lafta-gare en, oo ah ninka ugu daacadsan ee ku xiran Villa Soma lia, ayaa lagu amray inuu qabto doorashada, si uu wa ddada ugu furo Qoor Qoor iyo Cali Guudlaawe oo weli shaki iyo cabsi qabda.
Qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo dad kale oo xog ogaal ah ayaa arrintaan ku tilmaamay Ismiidaa min siyaasadeed oo weyn, islamarkaana sababi karta halis badan oo dib u dhac ah iyo dagaal.
Musharaxiinta: "Waxaa bilowday fulinta hanj abaadii afar sano la jeedinayey”
Golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saaray kulan ay Shalay ku yeesheen M/Muqdisho, waxay si adag ugu cambaareeyeen tallaabadii Dorraad lagu rasa aseeyey dad shacab ah oo dhigayey banaanbax ka dhan ah madaxweyne Farmaajo.
"Golaha midowga musharaxiinta waxuu si kulul u ca mbaareynayaa falkii foosha xu maa ee Dorraad ciidamo ka tirsan booliska iyo Nabad sugidda ay ku xabadeeyeen dhalinyaro si nabad ah u dhigayey mudaharaad ay ra’yigooda ku cab iray een,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha.
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku sii daray, "Wa xay shacabka Soomaaliyeed daawadeen dhalinayaro si nabad ah u mudaharaadaya iyo askari dharcad ah oo xabado ku ridaya gabdho ka mid ahaa dibadbaxayaa sha, iyadoo kadib hablihii si khasab ah xabsiga loogu taxaabay.”
Qoraalkan waxaa lagu sheegay in askarta dowlad du ay u muuqdaan kuwo fulinaya hadalladii ka soo ye eray madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale, sida gud doomiyaha G/Banaadir oo u hanjabay musharaxiinta iyo cid kasta oo ku dhaqaaqda tallaabo aysan raali ka heyn madaxda dowladda federaalka.
"Waxaan ugu baaqeynaa madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha inay cudur daar ka bixiyaan weerarkii lagu qaaday gabdhihii banaanbaxayey si deg deg ahna sha rciga loo hor keeno kuwii falkaas geystay, shacabkana u cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xoriyadda hadalka, kulamada dadweynaha iyo isu soo baxa shac abka,” ayaa lagu qoraalkan. Ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta ayaa ururrada bulshada rayid ka, guddiyada xuquuqul insaanka 2dda Aqal ee baarl amaanka federaalka, odayaasha dhaqanka, culumada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ugu baaqay inay falkaas ka dhiidhiyaan, kana soo saaraan war cad oo lagu cambaareynayo.
Wasiirka maaliyadda XFSmD. Cabdiraxmaan Duca ale Beyle ayaa ka hadlay lacagaha ay u qorsheysay DFS inay ku bixiso doorashooyinka lagu wado inay dal ka ka dhacaan.
Md. Beyle Wasiirka Maaliyada oo ka hadlay taleefishin ka qaranka ayaa sheegay in qarashka ku baxaya doora shada dhammaystirkeeda ay ka wada shaqaynayaan beesha caalamka iyo dawladda 27-da bishan si loo diy aariyo lacagta doorashada oo lagu qiimeeyey ilaa 40-Milyan oo Doller, islamarkaana dawladdu bixinayso 10% oo u dhiganta 4-milyan oo Doller, taas oo lagu ca ddeeyey miisaaniyadda 2021-da.
"Lacagtaas ayaa loo qoondeeyey in lagu fuliyo hawla ha baaxadda leh ee doorashada, sida safarada gudiya da doorashada heer Federaal iyo heer dawlad goboleed, goobaha ay dagaya an, xafiisyada shaqada, tababarrada Ergada iyo gunooyinka hawlwade enada.”ayuu yiri Wasiir Beyle.
"Ma jiri doonto lacag aan intaas ahayn in loo istcim aalo doorashada, mana dhici karto, wasiirku xitaa qa snadda dawladda lacag kama saari karo hanaanka maaliyadeed baa diidaya” ayuu yiri wasiir Beyle.
Dhinaca kale wasiirka maaliyadda ayaa xusay in aa nu jirin dawlad ama hay’ad caalami ah oo Soomaaliya ka joojisay lacag ay siin jirtay sabab la xiriirta doorash ada dalka ka dhacaysa, waxaana uu xusay in xiriirka wada shaqayneed ee Soomaaliyada la leedahay Bank iyada caalamiga ah iyo hay’adaha dhaqaalaha adduun ka uu yahay mid wanaagsan.
Dhowaan ayaa R/Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre kana mid ah musharaxiinta madaxweyna ha dalka waxa uu sheegay in laga joojiyay dowlada dhaqaalihii ay ka sugeysay beesha caalamka khilaafka ka jira qabashada doorashada awgeed.
Ajendeyaasha Shir Sanadeedka Machadka Heritage.
M/ Garowe ee xarunta G/Nugaal waxaa Shalay ka fu rmay shir aqoon is weeydaarsi oo sanadla ah , kaas oo ay soo qaban qaabisay machadka daraasadaha siyaasadda ee Heritage.
Shirkan ayaa waxaa ka qeeyb galayo gudoomiyaha Aqalka sare cabdi xaashi cabdillahi, madaxweynayaasha maamula da Galmudug iyo Puntland, Xubna ka tirs an midawga Musharixiinta xilka Madaxweynanimo , xil dhibaano iyo Qeybaha kala duwan ee Bulshada rayid ka ah.
Madashaan ayaa sanadkan waxaa looga hadlaya ajendayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin:
1: Xasilnta amniga
2: Qabashada Doorasho qof iyo cod 2025
3: Dhameystirka Dastuurka KMG ag
Iyo Yagyeelidda nidaam federaal oo shaqeynaya
M/Garoowe ee Caasimadda Puntland ayaa waxaa kusii qul-qulaya wufuud kala duwan oo ka qeyb galaya Shirka Madasha Aragti Wadaagga Sanadlaha ee Mac hadka Hirata goo markii horreysay lagu qabanayo dal ka Soomaaliya. Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle iyo xubno la soc day ayaa Shalay gaaray M/ Gar oowe, waxaana kusoo dhaweeyay Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Maamulka Pun tland. Musharax Geelle ayaa kamid ah Musharaxiinta Madaxweynaha ee lagu casuumay Shirka Madasha Aragti Wadaagga oo ka qeyb galayan Guddoomiyeya asha labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka iyo Mas’uuliyiin kala duwan.
Guddoomiye Maxamed Mursal Sh.Cabdiraxmaan iyo Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa duh urnimadii Shalay si kala gooni ah u gaaray M/ Garo owe, iyaga oo ay la socdeen Xildhibaano badan.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in M/Garoowe ee Xarunta G/ Nugaal ay gaaraan wufuud kala duwan oo kamid yihiin Musharaxiinta Madaxweynaha Soom aaliya iyo xubno kale oo ka qeyb galaya Shirka.
Xukuumadda Puntland oo go’aanno adag ka soo saartay xakamaynta Sicir-bararka
Xukuumadda Puntland, ayaa mar kale soo saartay go’aanno lagu xakamaynayo sicir-bararka iyo qiima dha ca Shiling Soomaaliga ee ka taagan de gaannada Pun tland, kaas oo saamayn ba’an u gaystay nolosha Bul shada.
Madaxweynaha Puntland Siciid C/hi Deni, oo wa rbaahinta la hadlay, ayaa shaaciyay in do wladdu go’aamisay in 10% canshuurta dekedda Boosaaso lagu qaado Shiling Soomaali,si looga jawaabo cabashada ka timid Ganacsatada.
Madaxweyne Deni, ayaa sidoo kale wuxu sheegay in xukuumaddu go’aamisay in $10 Dollar iyo wixii ka yar aan la isu’gu dirin Karin adeegyada Lacagta danabay san sida Sahal iyo E-Dahab.
Wuxu xusay in go’aankan dowladdu ku dhawaaq day, kadib soo jeedinta Guddigii arrimahan loo saaray iyo latashiyo badan oo dowladdu la sameysay Ganacs atada iyo dadka
Puntland Oo Odey Da’ Ah Gaajo Iyo Oon Dartood Ugu Geeriyooday
Wararka aan ka heleyno Magaalada Garoowe ee Xarunta G/Nugaal ayaa waxaa ay sheegayaan in shal ay Kaam ku yaalla halkaas uu qof shacab ah uu ku geeriyooday. Qof kaas oo lagu sheegay inuu ahaa Od ey waayeel ah ayaa la tilmaamay inuu gudaha Kaamka lagu magic aabo Shabeelle uu ugu geeriyooday Gaajo iyo oon dar tood, kadib markii uu waayay Cunto iyo Biyo uu cabo, kadibna uu halkaas ku dhintay.
Xildhibaan ka tirsa
n Golaha deegaanka Magaalada Garoo we oo Qoraal soo saaray ay uu ku sheeg ay in Golaha deegaan ka lagu soo wargeliyay in Hab een hore Ka amka Shabeelle uu Odey waayeel ah ku geeriyooday.
Xildhibaan Axmed Abshir Surato ayaa waxaa uu cad eeyay in dadkii Odeygaas wax siin jiray oo danyar ahaa laga diiday in Suuqyada Garoowe wax looga iibsado Lacagta Shiling Soomaaliga oo heysteen.
"Shalay mar aan fadhiyey shir-ka Golaha Deegaanka Degmada Garowe waxaa warbixin nala ku siiyey Ha been hore Garowe kaam ku yaal oo la yiraahdo kaam Shabeele in uu nin waayeel ah ugu geeriyooday gaajo iyo oon kadib markii dadkii quudin jiray Shilimaadkay haysteen ay suuqa waxba uga goyn weyday.
Waa masiibo hadii warkaasi saxyahay. Dadka ALLE wax siiyey waxaa la gudboon inay sadaqo la baxaan oo ay ka warhayaan qofwalbana xil iska saaro qaraabadi isa iyo dariskiisa inta jilicsan, arinkaan kuweena wax haysta ayaa lagu imtixaamayaa ee ALLE uma waayin dadkiisa deeqdii sa” Axmed Abshir Surat.
Si kastaba Magaalada Garoowe ayaa Shalay wax aa ka dhacay banaanbax ballaaran oo looga horjeeday diidmada lacagta Shilling Soomaaliga iyo Sicir barar xoogan oo halkaas ka jira, waxaana la sheegay in Gan
acsatada ay diideen inay qabtaan Shilling Soomaaliga.
RW Rooble oo kulan la qaatay Ururada Bulsha da Rayidka & Culimada
R/Wasaaraha X/F/Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan wadatashi ah oo ku addan doo rashooyinka la qaatay ururrada Bulshada Rayidka ah iyo culima’udiinka Soomaaliyeed.
Kulankan oo lagu xoojinaayey xiriir ka wada shaqayneed ee urrurada Bul shada, Culima’udiinka iyo dowladda, ayaa isla markaana looga wadatasha nayay tallooyinkooda ku addan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho nabadoon.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa bulshada rayidka ah iyo cul ima’udiinka warbixin faah faahsan ka siiyey dadaallada xukuumadda ee ku addan qabsoomidda doorasho xasilloon, isagoona sheegay in booqashooyinkii uu ku tagey Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug ujeedkoodu ahaa sidii loo xalin lahaa tabashooyinka jira.
Guddoomiyaha ururrada bulshada rayidka ah ee SONSA Cismaan Muxyadiin Shaatax ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha ay isla meel dhigeen dhowr qodob oo saldhiggoodu yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta jawi nabdoon, iyadoo la ilaalinayo heshiis yadii siyaasadeed ee laga gaaray doorashooyinka.
Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay Shacabka Gaalkacyo
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye " Qoor Qoor” oo ku sugan Magaalada Gaalkacyo ee xa runta gobolka Mudug ayaa kulan xog wareysi ah la ye eshay shacabka magaalada,isagoo wax badan ka wey diiyay baahiyaha ay qabaan.
Sidoo kale, madaxweyne Qoor Qoor ayaa u kuurgalay dhaq dhaqaaqa gana csi iyo hab nololeedka Bulshada Gaalkacyo,wuxuuna dhageystay talooyinka ay soo jeediyeen oo ku aadan horumarinta dadka iyo deegaanka.
Madaxweynaha Galmudug ayaa ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono amniga kana shaqeyn do ono isdhex galka Bulshada walaalalaha ee wada dega magaaladaas.
Dowladda Jabuuti ayaa loo xil saaray in ay yareyso sii socoshada khilaafka Diblomaasiyadeed ee u dhaxee ya labada Dowladood Soomaaliya iyo Kenya ka dib kul ankii dhawaan ugu soo dhamaaday wadamada ku jira Urur gobolleedka IGAD dalka Jabuuti.
Jabuuti ayaa wafdi xaqiiqo raadin ah u direytay xad ka labada dowladood si ay u soo eegto xaalada halkaa ka taaggan iyadoo xiisada xudduuda ay qeyb ka tahay arrimaha ugu waaweyn oo ay labada dowladood isku hayaan.
Maxamuud Cali Yuusuf oo ah wasiirka wasaarrad da Arrimaha Dibadda dalka Jabuuti ayaa sheegay in dowladiisu wafdi xaqiiqo raadin ah u dirtay xadka lab ada dal ee muranku ka jiro.
Dowladda Soomaaliya ayaa shirkii ugu danbeeyay ee ku soo dhamaaday dalka Jabuuti waxaa cadaadis lagu saaray in ay soo dhameyso khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dalka Kenya, lagana heshiiyo dham aanba qoddobada leysku hayo.
Kooxdan ay Jabuuti u dirtay xadka labada dal Kenya iyo Soomaaliya ayaa xogta ay soo helaan kula noqon doona dalka Jabuuti si halkaa looga sii waddo dada llada dhax-dhaxaadinta ah.
Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qara mada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan ayaa ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo Caqabado badan oo DFS la kulantay sandkaan sii dhammaanaya ee 2020.James Swan ayaa waxaa uu sheegay in Soomaaliya caqabadaha ay la kulantay ay kamid yihiin dhinacyada siyaasadda, amniga iyo ban i’aadamnimada, iyo Musiibada COVID-19, Isla markaana ay jiraan tallaabooyin horumar ah oo dowladda gaartay.
Waxaa uu sheegay James Swan in Mada xda DFS iyo kuwa maamul goboleedyada ay heshiis ka gaareen doorashada dalka ka dhaceysa, ayna sanadk aan 2020 Madaxda muujiyeen isu tanaasulka, sidoo kalena la gaaray heshiisyo is afgarad ah.
"Soomaaliya waxa ay la kulan tahay 2020 caqab ado badan, oo ay ka mid yihiin dhinacyada siyaasadda, amniga iyo bani’aadamnimada, iyo sidoo kale Musiib ada COVID-19. Isla markaana, waxaa jiray astaamo horumar leh sida deyn cafinta iyo heshiiskii hoggaamiy eyaashu ay ka gaareen hannaanka doorashada ee sa nnadka 2020-2021. Waa muhiim in dareenka isu tanaa sulka, iyo sidoo kale is afgarad iyo wadahadalladu, ay sii socdaan si loo ilaaliyo loona horumariyo guulaha la gaaray,” ayuu yiri Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee q/ Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan.
Waxaa uu hadalkiisa sii raaciyay James Swan "2021 wuxuu noqon doonaa mid muhiim u ah horumarka So omaaliya,” ayuu yiri. "Ammaanka, waxa uu ahaan do ona mid ku wareega dowladda Soomaaliya oo iyada ayaa mas’uul ka noqon doonta; dhaqaalaha, waxa ay sii wadi doontaa dib u habeynta si ay u xaqiijiso faa’ii dada buuxda ee ay ku guuleysatay ee geeddi-socodka deyn-cafinta, xaaladda bani’aadamnimada, weli waxaa jira 5.2 milyan oo qof, oo ah qiyaastii saddex meelood meel dadka dalka ku nool, oo u baahan taageero. Iyo, dabcan, hanaanka doorashada ee doorashooyinka ba arlamaanka iyo madaxweynaha. Waxaan rajeynayaa inaan arko wadashaqeyn dheeri ah iyo is afgarad ka dhex dhaca madaxda Soomaalida ee arimahan muhi imka u ah Soomaaliya, iyo sidoo kale tallaabooyin adag oo la xiriira dimuqraadiyeynta dalka, oo ay ku jiraan xoojinta hay’adaha iyo aasaaska doorashooyinka ‘hal qof iyo hal cod ah’ sanadka 2024 -25.”
Qaar Kamid Ah Dadkii Dorraad Lagu Rasaasee yay Muqdisho Oo Falkaas Ka Hadlay
Qaar kamid dadkii Dorraad banaanbaxa ka waday Isgoyska Dabka ee M/ Muqdisho ee uu rasaas ku furay Nin ku hubeysnaa Bastoolad oo dharcad ahaa ayaa ka hadlay falkaas lagu rasaaseeyay.
Dadkaas oo isugu jiray 3Gabdhood iyo Wii l oo warb aahinta la hadlay ayaa u sheegay in Nin hubeysnaa Bastoolad uu si bareer ah du shooda ugu riday rasaas, kuna handaday Bastoolad uu watay, xili ay dhigayeen ba naanbax nabadeed oo ay uga soo horj eedeen Mada xweyne Maxamed C/hi Farmaajo.